အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: October 2007
ဘာလက်နက်နဲ့ ဘဲတိုက်ရ.တိုက်ရ..ဒို့ လွတ်လပ်ကြဖို့ ဆို
သင်၏ ဖြုစင်မှု..သူ့ အမဲကို..အန်မတုနိုင်...
ညစ်ပတ်စုတ်ပြတ်..မေတ္တာပို့ တဲ့ သံဃာကိုသတ်..
လူ့ စည်းမှာမှမရပ်ရင်.. ဘီလူးစည်းတားကြရအောင်
မောင်မောင်ခေါ်တုန်း သူက ဗျာမထူး..
အမှန်လေးတော့ ..စာနာကြည့်လှဲ့ ပါ။
ပါးစပ်ကလွဲ.. ဘာလက်နက်မှမရှိတဲ့ဒို့ ..
ဆန္ဒပြနိုင်သူ.. သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြပြီးတိုက်.
မီဒီယာ .ဘလော့ဂါများ..သုတို့ အဆဲခံပြီးတိုက်..
မိန်းခလေးများက.ရှုံချ..သူတို့ အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ တိုက်..
ဘ၀နဲ့ ရင်း..အသက်နဲ့ ရင်း
အဓမ္မ မှုကို.. ဓမ္မနဲ့ တိုက်မည်..
မရရင်.. အဓမ္မ မှုကို.တန်ပြန်.အဓမ္မ..နဲ့ တိုက်မည်..
ရှေ့ ကိုဘဲ..ဆက်တိုက်ရဲဖို့ လိုသည်။
မသဒ္ဓါ ( ၁၀။၃၀။၂၀၀ရ)
မောင်လေးရဲ့မြင့်မြတ်သော အယုအဆကို လေးစားပါသည်။ လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲနိုင်ပါတယ် မောင်လေး..။ လမ်းစဉ်တွေပေါ်ကချော်ထွက်သွားတာမဟုတ်ပါ။ သင်.မြွေဖမ်းလိုကမြွေဘယ်လိုပေါက်နိုင်သည်ကို မဖမ်းမီလေ့ လာသင့်ပါသည်။ ယခုပွဲသည်ရှေးခေတ်က မြင့်မြတ်သော စစ်ဘုရင်နှစ်ဦး၏ စီးချင်းထိုးခြင်း မဟုတ်။ စစ်အစိုးရ သည် သိက္ခာနဲ့ သစ္စာကို နားလည်တဲ့ သင်နဲ့ တန်းတူ လူမဟုတ်။ သင်ပျော့ညံ့လျှင်သင်ရှုံးမည်။ မိန်းမများ၏ပင်တီတိုက်ပွဲသည်ဝတ်ပြီးသားအဟောင်းများအား ယုတ်ညံ့စွာပေးပို့ ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိန်းမ အတွင်းခံအသစ်များကို.မိန်းမဆန်သော.လူုသတ်ကောင်များ အားရှုံ့ ချသော သဘောထား၍ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယုတ်ညံ့သော witch crafts , black magic မဟုတ်ပါ.။ မိန်းမအ တွင်းခံသည် မ၀တ်ရသေးပါက ယောက်ျား၏ အတွင်းခံ နှင့်အဆင့်အတန်း အတူတူသာဖြစ်ပြီးပုံသဏ္ဍာန်သာ ကွာခြားမှုရှိပါသည်။ နားလည်ပေးပါ။ ကျေးဇူုးတင်ပါသည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 9:26 AM0comments
သင် လူဘ၀ ရောက်ခဲ့စဉ်
သကလ ၀ဋ္ဋ ဒုက္ခ နိဿရဏ
သူ့ တို့ ကအာဏာရှင်..
ပေါင်မုန့်မရှိရင်..ကိတ်မုန့် စားပါလား ပြည်သူတွေ..
အာဏာရှင်ဆိုတာ..သူ့ တဘို့ သာဘဲ
ဒို့ တတွေနဲ့ လက်တွဲ..မင်း..တော်လှန်ရဲရင်.။
မသဒ္ဓါ ( ၁၀။၂၈။၂၀၀၇)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:18 AM0comments
ဒို့ အဖိုး ယူနီဘာစီတီကျောင်းသား..
ဂုဏ်ထူးဆောင်နှင်းခဲ့ တဲ့ ဆုဒါး။
ဒို့ အမျိုးရာဇ၀င်ကို ရိုင်း၊
သန်းရွှေစစ်အာဏာရှင် ရဲ့နောက်လိုက်။
ဒို့ တူသားလက်ထက်၊ မှိန်ဖျော့တော့အရောင်ပျက်၊
အားမတန်လို့ အမှန်အတွက်၊ မင်းဘဲသေသေ..
ပုန်ကန်လိုက်တော့။ အာဏာရှင် စံနစ်ဆိုး၊
အားလုံးရဲ့ အနာဂတ်ဟာ၊ မင်းနဲ့ဆိုင်သည်။
ဇာတိ နွယ်မျိုး၊ မင်းတဖန် ဖြူရှင်းသန့် စေ၊
ဒါဒို့ ပြေ..ဒါ ဟာ.ဒို့ ရဲ့မြေ။
ဇာတိ။ပုညဂုဏ်မာနကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့် တပ်မတော်သားအစစ်အမှန်များသို့ ..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:55 AM 1 comments
ပွဲပြီးတဲ့ အထိ..စောင့်ကြည့်။.ဘယ်သူနိုင်မယ် ?
ဖွဲမီးငွေ့ ငွေ့ ..အရှိန်တမြေ့မြေ့
ဒို့ နိုင်ပဟေ့လို့ .မာနထောင်လွှား..
ဒင်းတို့ မို့လုပ်ရက်သည်။
ဒို့ဇွဲမလျှော့ဘူး..
ဓမ္မ နဲ့အဓမ္မ.
မေတ္တာ နဲ့ စတဲ့ပွဲ..မေတ္တာကဘဲ..စူးဝင်..
ကြောက်ရွံ့ တာမဟုတ်..နောက်တွန့် တာမဟုတ်..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:37 PM0comments
မတွေ့ တဲ့ နှစ် ၂၀ ထဲ.မင်းတကယ်ပြောင်းလွဲ..
မင်းက ဇာတ်တော်ထဲက စိဉ္ဇာမာန..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 5:38 AM0comments
လေလှိုင်းကြားကအသံ..လူမဆန်တဲ့ ရှင်ယုတ်မင်းဆရာ..သို့ 
အမှန်ကိုမဆုံးမ ရဲ. .တရားမမျှတတဲ့လမ်းလွဲ..
အာပုတ်နံ့ ရသော်လည်း..ပြောဖို့ ကျ နှာစေးနေတဲ့ယုန်
စတေးထားဖို့ အမိန့် ပေးတဲ့ရှင်အို..
မကျွတ်မဲ့. ကဋ္ဋေကဋ္ဋာနဲ့ အပြစ်
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:37 AM0comments
ဒီနေ့စက်တင်ဘာ ၂ရ ရက်.၂၀၀ရ.
ဘုရားဆွမ်းတော်နဲ့ သစ်သီး. ပန်းနဲ့ ဆီမီး..
အသက်ရှည်ရာ. အနာမဲ့ကြောင်း ဆုတောင်းနေဆဲ.
တာ့တာ့ ပြ နှုတ်ဆက်..
ကြောင့်ကျ ပူပင်စိတ်နဲ့ ..ကျမရှာခဲ့.
သွေးစက်များနဲ့ ခန္ဓာတချို့ 
မျက်ရည်ယို..မီးခိုးငွေ့ က မွှန်ထူထူ..
မိစ္ဆာများရဲ့ ရက်စက်မှု နိမိတ်ပုံ။
ဘာမှမသိသေးတဲ့..ခလေးရဲ့အသက် ၄ နှစ်
မရှိ ..မရှိ. .ပြည်သူတွေမှာ..ဘာမှမရှိ.
လူတွေ စာမတတ်ကြမှ..ဒို့ တတွေအသာရ..
လူတွေ ထမင်းငတ်ကြမှ..ဒို့ ခြေထောက်လာဖက်ကြ..
ဆရာတော် ဦးဝိစာရကမှ ကံကောင်းသေး
ပြင်သင့်ကြပြီ..ဒို့ အနာဂတ်သို့ မျှော်ရည် ။
သတ္တိမွေးထားပါ ဒို့ ပြည်သူညီညီ.
သာသနာ့ရဲ့ တံခွန်ထူ. ကမ္ဘာကိုငြိမ်းချမ်းစေလိုသူ..
ဗျာပါဒ က ဖိစီး..
ချောင်းတွင်းမှ ဘ၀နိဗ္ဗါန်သို့ ပျံလွန်တော်မူသောရဟန်းရှင်အားရှိ်ခိုးပူဇော်ပါသည်ဘုရား။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:44 AM 1 comments
ဒုတိယအရွယ်..မမျော်လင့်ဘဲ ပစ္စန္တရစ်.မှာ ရောက်
ဆွမ်းတော်ဗျို့ နဲ့ ကြေးစည်ညံ
မင်းယုတ် အာဏာစက်မိုးသို့ ချုန်း
ဒို့ အနာဂတ်များ..ကျောက်ရိုင်းခေတ်သို့ ပြန်သွားနေ။
၃၈ ဖြာမင်္ဂလာလွှမ်းခြုံ..မေတ္တာနဲ့ လုံခြုံဖို့ 
ဒို့ သံဃာ့ ဂုဏ်တော်များ .ပြန်လည်ထွန်းပြောင်လာစေရေး.
မကြောက်မရွံ့့ ..ရဲဝံ့ခဲ့ပြီ.
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:48 AM0comments